Wararka Gudaha – Page 4 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 May 15, 2019 0
Barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada Waa Barnaamij dhumuc weyn leh oo Habeen Walba Kabaxa Idaacada ALFurqaan Marka laga Reebo Habeenka Sabtiga Waxaana Lagu soo Qaataa Qodobo xiisa leh Oo kala duwan Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa wareysiyada 15 05…
Halgankii Daraawiishta: Dhagayso Qeybta 10-aad.
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa’iyah: Sheekh Cali Katiin(Dhagayso 01-10)
Kitaabka Al-Arbacuuna-Nisaa'iyah waa kitaab qayim ah oo si gaar ah u taabanaya haweenka muslimaaka ah, waxaana Idaacadda Al-Furqaan ka jeediya Sheekh Cali Katiin oo kamid ah culimada diinta Islaamka. Halkan ka dhageyso Dersiga 1-aad ee…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan ka dhageyso War duhur 15-05-2019 lite
Faafaahin laga helayo Khasaaraha ka dhashey Camaliyadii lagu qaaday xarunta Wardhiigley.(Dhagayso)
Naftii hure katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maalintii shalay weerar ku qaaday xarunta maamulka degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir, halkaas oo uu ka socda kulan ay isug yimaadeen laamaha amaanka ee degmada. Weerarka…
Kitaabka Qasasul Anbiyaa; Sheekh Cabdi-Raxmaan Firin(Dhagayso 01-10)
Kitaabka Qasasul Anbiyaa waxaa munaasabadda bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ka jeediya Sheekh Cabdi-Raxmaan Firin oo kamid ah culimada diinta Islaamka ee Soomaaliyeed. Halkan ka dhagayso Dersiga…
guuleed	 May 15, 2019 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbneynaa warka subaxnimo oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war subax 15 05 2019.
guuleed	 May 14, 2019 0
Insha allaah halkaan waxaanu idin kugu soo gudbineynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso dhuuxa wareysiyada 14 05 2019.
Axmad	 May 14, 2019 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo oo lagu soo qaatay qodobo muhiim ah. Halkaan ka dhegeyso war duhur 14 05 2019